93W « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ် ဗီယက်နန်ကမ်းလွန်၌ ယခုလကုန်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း ဖြစ်ရန်သေချာ
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W စတင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W စတင် ဖြစ်ပေါ်
By mmweather.ygn, on May 3rd, 2013%
မေလ(၃)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ – ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၆၅၅ မိုင်ခန့်၊ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၇၃ဝ ခန့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် မေလ(၃)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝဝး၃ဝ နာရီမှ စတင်၍ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပါသည်။ ကနဦးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ 93W သည် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အရှေ့မြောက်ဘက်သို့တစ်နာရီ ၅ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W 03 May 2013 0000Z Location: 16.2 115.0 Winds: 15 . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W စတင် ဖြစ်ပေါ်
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W မြိတ်မြို့ အနီးသို့ ရောက်ရှိလာ
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 93W သည် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် မြိတ်မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၁ မိုင်ခန့်အကွာ ကုန်းတွင်း လေဖိအားနည်းဆဲလ် အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး မြောက် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
93W 24 Oct 2012 0000Z Location: 12.3 98.9 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa
. . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W မြိတ်မြို့ အနီးသို့ ရောက်ရှိလာ
2 comments Uncategorized လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေ
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ဖြစ်ပေါ်
By mmweather.ygn, on October 22nd, 2012%
အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း ရွေ့လျားမှု အရ ခန့်မှန်းရပါသည်။
93W 22 Oct 2012 0600Z Location: 5.3 107.5 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa
93W သည် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၈ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ နေ့လည် ၁၄၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W ဖြစ်ပေါ်